Vaovao - Drafitra famokarana singa sivana tsy voadio vy
Leaf Disc sivana
Fampivoarana ny singa sivana vy tsy misy fangarony
Ny singa sivana amin'ny harato vita amin'ny vy tsy misy fangarony dia antsoina hoe singa sivana vy tsy misy fangarony. Ny singa sivana dia vita amin'ny lamba dimy an'ny harato sinter amin'ny alàlan'ny superposition sy ny fantsom-panafahana. Ny singa sivana amin'ny efijery sinteran'ny vy tsy misy fangarony dia vita amin'ny harato vy tsy misy fangarony, izay mizara ho faritra dimy: sosona fiarovana, sosona sivana, sosona fanaparitahana, sosona rafitra ary sosona rafitra. Ny fitaovana sivana dia manana ny fitoviana fanivanana mitovy sy miorina, tanjaka avo ary henjana, ary fitaovana sivana tsara indrindra ho an'ny fotoana misy fepetra takiana amin'ny tanjaka compressive sy ny fanitsiana fanamiana mitovy.
Ny fahasamihafana lehibe eo anelanelan'ny singa sivana harato vita amin'ny vy tsy misy fangarony sy ireo singa sivana hafa dia ny fampiasana fizotran'ny fanamafisam-peo avo lenta. Ny singa sivana sinterin'ny harato vy dia vita amin'ny cartridge sivana sinter aorian'ny fanapahana sy ny fantsona avo lenta. Ny teboka manan-danja indrindra amin'ny cartridge sivana sinter dia ny fampiasana teknolojia fanamafisam-peo avo lenta. Ny cartridge sivana sinter dia ahodina amin'ny welding rehefa avy mihodina. Tokony ho azo antoka ny boriborin'ny fehikibo. Ny zaitra mihombo dia tokony ahitsy aorian'ny fametahana mba hahatonga ny tarehy rehetra ho tsara tarehy kokoa.
Ny fisafidianana ny akora, ny fifehezana ny marina ary ny fizotran'ny fehin-kibo dia lafin-javatra telo tena ilaina amin'ny singa sivana amin'ny harato vy manodina vy. Ny vokatra eny an-tsena dia mifangaro amin'ny mason'ny trondro, fitaovana ambany, ambany famenoana ary avo lenta ny sivana, ary ny teknolojia fanodinana henjana, izay mahatonga ny vokatra sasany manome vidiny ambany dia ambany. Ny mpanjifa dia mila manafosafo ny masony mba hialana amin'ny fatiantoka mihoatra ny tombony ary miteraka fahaverezan'ny lozam-pifamoivoizana.
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny singa sivana vy tsy misy fangarony sy ireo singa sivana hafa dia ny fampiasana ny fizotran'ny fanamafisam-peo avo lenta. Ny harato vy tsy misy fangarony vy dia voafafy aorian'ny fikororohana. Ny boriborin'ny fantsom-boaloboka dia ho azo antoka ary ny lasitra dia havoana aorian'ny fangejana, mba hahatonga ny tarehy iray ho tsara tarehy sy hiomanana amin'ny famafana ankapobeny.
Avy eo, ny volo sinter dia mihodina amin'ny fonony farany amin'ny lafiny roa amin'ny alàlan'ny tariby vy vy. Mandritra ny fizotran'ny welding, ny harato manarona dia tsy azo may mba hisorohana ny fandoroana sy ny fahasimban'ny toerana eo an-toerana, ka nahatonga ny singa mpanivana tsy nilalao anjara asa sivana. Noho izany, ny fiarovana ny entona argon dia tsy maintsy tanterahina amin'ny tontolon'ny welding mandritra ny fizotran'ny welding. Ireo fizotran'ny welding rehetra etsy ambony dia tsy maintsy manana fitaovana fampitaovana sy fitaovana fanaraha-maso manokana, ary ny fepetra takiana amin'ny teknolojia welding dia somary henjana ihany koa. Raha misy fivoahan'ny rivotra ao amin'ny tsindry aorian'ny fitsapana ny bubble welding dia esorina daholo ireo singa sivana.
Fotoana fandefasana: Dec-02-2020
Sivan-drano, Filtration amin'ny rivotra tsy miova, Sivana entona indostrialy, Sivana mandeha amin'ny fiara, Sivana amin'ny rivotra, Sivana tsy misy vy,